१८ चैत, काठमाडौं । २८ मार्चमा भारतमा संसारकै सबैभन्दा धेरै ६८ हजार २० जना कोरोना संक्रमित पाइए । यो आँकडा पछिल्लो १ सय ६९ दिनयताको सबैभन्दा धेरै हो । यसअघि अघिल्लो वर्ष १० अक्टोबरमा ७४ हजार ४ सय १८ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।
भारतका १५ भन्दा धेरै जिल्लामा कोरोनाको दोस्रो लहरले भयानक रुप लिइसकेको छ । यी जिल्लामा नयाँ संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहेको छ । यद्यपी, अझै पनि दोस्रो लहरको उच्च अवस्था आइसकेको छैन ।
उच्च बिन्दु कतिबेला आइपुग्छ ? यसबारे कुनै पनि वैज्ञानिक स्पष्टसँग केही पनि बोल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् किनकी अहिलेको अवस्थालाई संक्रमणको दोस्रो लहरको सुरुवाती चरण मानिएको छ । सेप्टेम्बर २०२० मा पहिलो चरणको उच्च अवस्थामा महाराष्ट्रका केही जिल्लामा संक्रमितको ग्राफ जे थियो, अहिले त्यो तीन गुणाभन्दा धेरै भइसकेको छ ।
महाराष्ट्रको अवस्थाबाट सिक्नु जरुरी
वैज्ञानिकहरुका अनुसार महाराष्ट्रको अहिलेको अवस्थाबाट सबै राज्यले सिक्नुपर्छ । महाराष्ट्रमा नयाँ बिरामीको संख्या बढ्नुको प्रमुख कारण परीक्षण कम हुनु हो । मुम्बई, पुणे, नागपुरजस्ता जिल्लाबाट हरेक १ सयमा परीक्षण गर्दा २० भन्दा धेरै संक्रमित देखिएका छ । संक्रमणको दोस्रो लहर पहिलेको दाँजोमा धेरै संक्रामक छ भन्ने यसैले देखाउँछ ।
काठमाडौं प्रवेशमा फेरि कडाई, साँझ ७ देखि बिहान ७ बजेसम्म प्रवेश निषेध !
गाई काटेर खान खोज्ने प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दर्ता
कोरोना महामारीका बीचमा ३२ देशबाट १ लाख २३ हजार बढी नेपाली स्वदेश फर्किए